Indlela ukuwina bayilimaza Stars #2 "Sneak and Assassinate" [Guide]
Home Brawl Stars Guide Indlela ukuwina bayilimaza Stars #2 “Okuhamba kunye lokubulala” [Guide]
Enye imidlalo kakhulu kulindeleke, oko ifikile kwaye kwakhona isikhokelo sethu bayilimaza Stars na apha ukuze abadlali ezintsha!
Unokuzilungiselela njani ukuze bafunde iindlela zokulwa ezintsha kunye nemiyalelo eselekhulile kakhulu leyo eya akhankanywe phantsi ngezantsi. Hlala ngoku nge Bayilimaza Stars kugula inkonzo ukuze nakulwa ezintsha.
Bayilimaza Stars wadalwa kwaye epapashwe 'Supercell "kwaye iyafumaneka ekugqibeleni ngoku kwiivenkile ukuba ulayishwe ezantsi kwaye wadlala simahla. Nandipha ukudlala kwi device yakho Android okanye nokuba isebenza yayo iOS. Lo mdlalo inkxaso amaqonga ezininzi, ngoko into enjalo engamelanga ithathwe njenge njengomba kuwe.
zithathwa Iimfuno umdlalo ukuba avareji encinane bit. Ngoko ke musa ukuthetha malunga flagship kufuneka ukuba oko ukusebenza, eneneni nantoni Uyokwenza ingakumbi xa yayi flagship endala ukuba abalekele kuyo kakuhle ngaphandle lag ukubalula.
Xa sele wadala le nguqulo ngokutsha, yonke wayeselapho version beta njengoko saba ukufikelela kwangoko kuyo. Ngaphandle nawuphi na umdlali ngaphandle phaya. ukuze nantoni na kwatshintsha iinguqulelo ezayo yi ngokupheleleyo aphume uxanduva lwethu nathi bayazi njani ukuba aguqulelwe nayo.
Ke siyakholwa akukho nto imbi, ukuba sithe saqalisa intetho lwethu Ikhaphetshu uPatch nendlela ujonge ngaphakathi, Kakade kuya kubakho kukhankanya utshintsho ezahlukeneyo ezenzeka kwi Ukudlala ngokwayo.
Zilungiselele Yourself ngokuba A New Challenge Kwimo Ikhaphetshu.
Xa Ikhaphetshu isiziba yonke into eyahlukileyo ukusuka iindlela umdlalo yangaphambili, ukuze zilungiselele wena ukuba amava ekhethekileyo kakhulu. Sithetha ngayo yonke ngethemba ezahlukeneyo umdlalo.
injongo yakho ephambili kukho ukufumana indlela ekhuselekileyo ukufikelela utshaba respawn point uze uzame ukufaka neebhombu ezifana TNT ukuwavuthela bonke. oku kungaba ibali umdla kakhulu kwi iphepha kodwa xa achole angaxokozeliswa kungena khona. izinto ziza kutshintsha kakhulu.
Iingcebiso zethu bayilimaza Stars kuya kukunceda ukohlwaya olu hlobo mission enye.
Khumbula Goal lakho Main.
Siye kuboniswe ngaphambili injongo yakho ephambili kwaye uya kube ujongene iitoni mingeni kodwa zange okhankanywe kodwa ukufumana indlela ezalisiweyo kunye nemali lisezantsi umonakalo. Ekuqaleni ukufumana i bayilimaza Stars uyakopa kwinkonzo kwaye cinga akhohlwe phantse yonke into ibe njengomqobo kuwe.
Ukweqa kwaye exhumaxhuma ukusuka block mnye into elungileyo ukwenza. Musa ukubandakanya neethagethi utshaba ngaphandle kokuba ndlela usondele kakhulu kulo kwaye akukho ndlela eya siyaphepha kokuhlaselwa.
Okuhamba kunye lokubulala.
Ukulwa ziya kulibazisa kuphela isantya yakho inkqubela, so get the fastest brawler possible with the Brawl Stars hack for free.
Ukukhetha le angaxokozeliswa kule imo kufuneka zisekelwe kumgangatho bhetyebhetye kunye ukomelela ngokunjalo. Ngaba awufuni nayiphi angaxokozeliswa olomeleleyo kuba kade njengoko akukho kufanelekile ukuba le ndlela.
Kukho ityala xa kuza kufuneka ukuba uthathe umva inyathelo kwaye uqalise ukucinga ngomsebenzi ukwenza elandelayo emfazweni. Ngayo xa iindonga wena ukweqa emva kokuba wachithwa, yadilika. Mhlawumbi nzima kakhulu kuwe, kodwa oko kuya kukulahlela banzi.
Xa Iindonga Get Ezantsi, Kwakho wokunyuka!
Ukuba i lula ekujoliswe na ixesha ukuze azambatha amagiya ekunene kwaye usebenzise bayilimaza Stars kugula. Oku kanye xa kungena yokulwa vula uzama ukubonisa inqanaba wakho ubuciko.
Phucula enqanda zakho elinye xa kuthelekiswa omnye kwakunye nezakhono elawula kufuneka sibe khona phambi kokuba unyathele unyawo kule imo ayidlaleki.
Phumelela imingeni kwaye wonwabele iitoni zemali free kwi imfuyo yakho akhawunti.
Post loqobo ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu >> http://newstarship.com